July Dream: Paper tiger
ဘယ်သူတွေ ဘာပဲပြောပြော မှန်တာပဲ ဒို့လုပ်နေသည်... အတော်လေးကို ဆိုလို့ကောင်းတဲ့ သီချင်းစာသားပါ။ အဲဒီသီချင်းက ပေါ်လစီသီချင်းဖြစ်ပေမယ့် စာသားအချို့ကို သဘောကျမိတာ ၀န်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို ဆိုနေတဲ့လူရဲ့ လုပ်ရပ်အပေါ်မှာတော့ အဲဒီစာသားအတွက် လိပ်ပြာလုံဖို့တော့ လိုလိမ့်မယ်။ တိုင်းပြည်အကျိုး မျှော်ကိုးပြီး တကယ်ကို အလုပ် လုပ်နေတဲ့သူတွေ လောကမှာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ အကျိုးမရှိတာတွေကို ဇွတ်တရွတ်လုပ်နေပြီး မှန်တာပဲ ဒို့လုပ်နေတာ... ဘယ်သူ့မှ ဂရုမစိုက်ပါဘူး ဆိုတဲ့သူတွေလည်း ရှိတယ်။ လေကြီးလေကျယ်တွေ အော်ပြီး အသံတာအောင်တဲ့ သင်္ကြန်အမြောက်လို အမြီးမြောက်လိုက် အီးပေါက်လိုက် ဝေလေလေကောင်တွေလည်း ရှိပြန်တယ်။ အဲဒီလိုလူမျိုးတွေက အဲဒီသီချင်းစာသားကို လက်ကိုင်ပြုနေရင် အတော်ရွံဖို့ ကောင်းသွားတယ်။
အွန်လိုင်းလောကမှာ ဖိုရမ်ဆိုတာကြီးနဲ့ အရင်ဦးဆုံး တွေ့ထိမိတယ်။ တမ်းတမ်းစွဲ မခွဲမခွါ နေဖြစ်ခဲ့တယ်။ နေ့စဉ် မပြတ် အင်တာနက် မသုံးနိုင်တဲ့ ဘ၀မှာတောင် တစ်ပါတ်တစ်ခါလောက် ဆုံဖြစ်အောင် ကြိုးစားခဲ့တယ်။ အကြောင်းအရာမျိုးစုံကို ဆွေးနွေးကြ ငြင်းခုန်ကြပေါ့။ တချို့တွေက စာရေး အရမ်းကောင်းတယ်။ ရှုထောင့် မျိုးစုံကနေ ဝေဖန်တတ်တယ်။ တချို့ကျတော့ အရာရာကို အကောင်းဆုံး ဖြစ်စေချင်ကြတယ်။ ဖြစ်နိုင်တယ် မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုတာကို ဘေးအသာချိတ်ထားပြီး ဒါမှ ဒါပဲလို့ တဇွတ်ထိုး ရေးကြတယ်။ တကယ်မှ မလုပ်ရပဲ စကားလုံးတွေ စာအနေနဲ့ကတော့ အဲဒီလိုမျိုး ရေးနိုင်တာပဲဆိုတာကို အတော်တုံးအတဲ့ ကျွန်တော်မျိုးငပွ သိခဲ့ရတာက အတော်လေးကို နောက်ကျလွန်းပါတယ်။ အဲဒီလူတွေကို အသားလွတ် အထင်ကြီးတဲ့ စိတ်တွေ၊ လေးစားတဲ့ စိတ်တွေ၊ အားကိုးတဲ့ စိတ်တွေ ရှိခဲ့မိပေမယ့် ဖွတ်ထွက်မှ တောင်ပို့မှန်း သိခဲ့ရတာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ မိအေးတော့ နှစ်ခါ အနာမခံနိုင်လို့ မသက်သာ ခပ်ခွါခွါနေခဲ့လိုက်တယ်။
မှတ်မိပါသေးတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ နာဂစ်ဝင်တော့ တိုင်းပြည်ကို ချစ်တတ်လွန်းတဲ့ မောင်မင်းကြီးသားတွေကို ကယ်ဆယ်ရေးတွေ ထူထောင်ရေးတွေမှာ ၀ိုင်းကူလုပ်ဖို့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဖုန်းဆက်ခေါ်ပါတယ်။ ဆင်ဖမ်းမယ် ကျားဖမ်းမယ်ဆိုတဲ့ သကောင့်သားတွေ အပင်ပန်းအဆင်းရဲဒဏ်မခံနိုင် ခြင်ကိုက်မခံနိုင်မှာဖြစ်လို့ ဆင်ဖမ်းဖို့ ကျားဖမ်းဖို့ နေနေသာသာ လက်နာမှာစိုးပြီး ခြင်တောင် မရိုက်တော့ပါဘူး။ ပြည့်စုံလှတဲ့ အိမ်မှာပဲ ခြင်ထောင်ချပြီး ကျမ်းကြီးကျမ်းခိုင်တွေ ကိုင်ပြီး စာဖတ်နေကြတယ်။ အချိန်တန်လို့ အရာရာ နေသားတကျ ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျရင် ဖတ်ထားတဲ့ ကျမ်းကြီးကျမ်းခိုင်တွေကနေ ထုတ်နှုတ်ထားတဲ့ စကားလုံးကြီးကြီးတွေကို ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင် မစဉ်းစားပဲ အာပေါင်အာရင်းသန်သန် လူကြားထဲမှာ ပြောနေအုံးမှာ အသေအချာပေါ့။
မြန်မာပြည်အတွင်း အဖွဲ့အစည်းတွေက တာဝန်ရှိလူကြီးမင်းတွေလည်း တာဝန်ယူထားတဲ့ ရာထူးနဲ့တန်အောင် စဉ်းစားဆင်ခြင် တွေးတောကြပါအုံး။ အဖြစ်လေးပဲ ပြီးပြီးရော လုပ်နေမယ်ဆိုရင် ဘယ်တော့မှ အောင်မြင်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သိနေရဲ့သားနဲ့ ဘာဖြစ်လို့ မိုက်တွင်းနက်နေကြသလဲ။ ဖွဲ့လိုက်ကြတဲ့ ကော်မတီတွေ အဖွဲ့တွေ မိုးဦးကျ မှိုတွေလိုပဲ ဟိုနားပေါ်လာလိုက် ဒီနားပေါ်လာလိုက်။ အဲဒီ ကော်မတီတွေ အဖွဲ့တွေမှာ ပါနေတဲ့ လူတွေက ဘယ်နှယောက်များ တကယ် အလုပ်လုပ်ကြသလဲ။ ကော်မတီ ဖွဲ့ပါဆိုလို့ ဖွဲ့လိုက်တယ်။ စိတ်ဝင်စားမှု မရှိတဲ့သူက အများသား။ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိပဲ ကော်မတီဝင် ဖြစ်နေတဲ့သူလည်း ရှိသေးတယ်။
အလုပ်မလုပ်တဲ့သူ၊ မလုပ်ချင်တဲ့သူတွေကို နေရာပေးထားပြီး တကယ်ကိုလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေ လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိလို့ ဘေးထွက်ထိုင်နေရတာမျိုးက အဖွဲ့အတွက် နစ်နာလှပါတယ်။ တကယ်လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေကို နေရာပေးမယ် ဆိုရင်လည်း နဂိုလူဟောင်းတွေကို ကန်ထုတ်ပစ်ရမယ်။ အတူတွဲလုပ်ဖို့ကျတော့လည်း သဟဇာတ မဖြစ်ပြန်။ အဲဒီတော့ ရန်သူအသစ် တိုးလာတာပေါ့။ စဖွဲ့ကတည်းက တကယ်လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ သေသေချာချာ ဖွဲ့ခဲ့ရင် ဘာဖြစ်သွားမှာမို့လို့လဲ။ သူတို့ကိုယ်တိုင်က စက္ကူကျားပဲ ဖြစ်ချင်ရင်တော့ မပြောတတ်တော့ဘူး။
ဘယ်သူတွေ ဘာပဲပြောပြော မှန်တာပဲ ဒို့လုပ်နေသည် ဆိုတော့လည်း...
ကျွန်တော် မြင်မိ အပြစ်ရှိ...
ကျွန်တော် တွေးမိ အပြစ်ရှိ...
ကျွန်တော် ပြောမိ အပြစ်ရှိ...
ကျွန်တော် ရေးမိ အပြစ်ရှိ...
အင်း... အဲဒီ စက္ကူကျား ထကိုက်ရင်တော့ သေရာပါ ဖြစ်တော့မှာပဲ။ ကြောက်တောင် ကြောက်လာပြီဗျာ။
ရဲရင့်လှပါလား ကိုဂျူလိုင်.... ပြောရဲဆိုရဲရှိပါရဲ့.. ချီးကျူးလိုက်ပါတယ်..
WAY TO GO JULY !! Nice one !
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ တကယ် မလုပ်နိုင် ပဲနဲ့ နေရာတွေ ယူထားတာနဲ့ စာရင် တကယ်အလုပ် လုပ်မဲ့သူများက နေရာယူသင့်ပါတယ် .... စက္ကူကျား ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံးလေးကိုတော့ ကြိုက်သွားပီဗျ .. အခွင့်အထူးခံတွေကတော့ နေရာတကာမှာ နေရာယူ တတ်ကြပါတယ်ဗျာ ...
The giant cage